33 France | RayHaber | raillynews
Guji waddamada khariidada si aad u akhrido warka tareenada, waddada iyo garoomada Faransiiska!
Shirkadda Alstom waxay saxeexday inay 30 tareen oo gobolka Coradia Lint ah siiso Hessische Landesbahn (HLB). Qandaraasku wuxuu ku kacayaa 120 milyan oo Yuuro. Tareennada leh 120 kursi waa kuwo waaweyn oo dhalaalaya oo naafo ah [More ...]
Faransiisku waxay u rogeen tareen xawaare sare leh (TGV) isbitaal si loogu diro bukaannada halkaas u direy gobollada kale, maaddaama cudurka Covid-19 uu si dhakhso ah ugu faafayo xarumaha caafimaad ee ku yaal gobolka barina ay ahaayeen kuwa aan ku filneyn. Ugu badnaan magaalada Strasbourg [More ...]
Gaadiidka Gawaarida, oo mid cusub ku daraya iskaashiga ay la leeyihiin Alstom, oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka ee waaxda gaadiidka tareenka, ayaa waxaa dhowaan soo saaray shirkadda Alstom iyada oo ay eber ka baxeyso hawada hydrogen-ka adduunka. [More ...]
Shirkadda fadhigeedu yahay dalka Faransiiska ee Tamarta iyo Gaadiidka Alstom, diyaarado ganacsi oo caalami ah oo fadhigoodu yahay Kanada, gaadiidka dadweynaha iyo tareen xawaare sare ku socda oo sameeya badeecad soo saarta Bombardier, ayaa wadar ahaan gaareysa 6.2 bilyan euro (6.8) [More ...]
Gawaarida guryaha, goobta labaad ee wax iibsiga ee Faransiiska oo leh xayeysiis been abuur ah 'oo iib ah'. Iibiyaha ayaa doonaya 30 kun euro oo loogu talagalay gaariga (qiyaastii 200 kun TL). Iibiyaha ayaa sheeganaya in gaarigiisa 12 kun oo kiiloomitir wadada! [More ...]
Waxaan ka qayb galaynaa kulan shaqaalaha shaqaalaha tareenka ee garaaca dibuhabaynta hawlgabka. Çiler Dagaalka jiilka dambe ayaa ah midka ugu saxsan, çiler shaqaaluhu waxay si wada jir ah u go’aansadeen in ay sii wadaan shaqada ay wadaan. Maalin Talaado, Diseembar 24, [More ...]
Shaqaalaha Tareenka ee shaqo joojinta ku jooga dalka Faransiiska, ayaa shalay hortegeen xarunta Gare de Lyon ee magaalada Paris. Shaqaalaha isku dhacay booliiska oo soo fara geliyay falka, ayaa maanta saldhiga ku sugnaa. Madaxweyne Emmanuel Macron 'dibuhabaynta howlgabka' ee Faransiiska [More ...]
Mu'asasada Alstom ayaa ku dhawaaqday xulashadeeda ugu dambeysa ee mashaariicda la soo gudbiyey muddadii 2019. Iyada oo wadarta guud ee mashruuca 158 la soo bandhigay, shaqaalaha Alstom waxay mar labaad muujiyeen sida ay uga go'antahay sadaqadda iyo taageerada bulshada. [More ...]
Shaqaalaha Tareenka Waddanka Faransiiska ayaa shaqada uga tagaya dib-u-habeyn hawlgab
Shaqaalaha tareenka ee Faransiiska ee ka soo horjeeday dib u habeynta ay dowladdu dooneeyso inay ku dhaqan geliso sharciga howlgabka ayaa ka tagay shaqadooda. Tallaabada shaqaalaha awgeed, carqalad ayaa ka dhacday adeegga tareenka. Shaqaalaha Tareenka ee Faransiiska, dowladda ayaa ka fiirsaneysa dalabka howlgabnimada howlgabka [More ...]
27 Luulyo 2019, Keolis, oo ka shaqeeya nidaamka gaadiidka dadweynaha ee Twisto, ayaa u xilsaaray Caen la Mer nidaamka tram cusub ee waqooyiga Normandy. 19 bilooyin ka dib shaqada, nidaamka taraamka cusub oo wata giraangiro caag ah [More ...]
4 qof ayaa ku dhintey halka 4 qof ay ku dhaawacmeen shil tareen oo ka dhacay magaalada Avenay-Val-d'or ee gobolka Marne ee waqooyiga Faransiiska. Waxay ku taal gobolka Reims ee waqooyi-bari Faransiiska, tareenka Avenay-Val-d'or waa a [More ...]
Yaa ku guuleysan doona tartanka xawaaraha sare?
Nidaamyada tareenka xawaaraha sare, gaar ahaan Aasiya iyo Yurub, waxay la tartamaan safarka hawada labadaba marka loo eego qiimaha tikidhada iyo wadarta safarka albaab-ilaa-albaab. [More ...]